हाम्रो बारेमा - ज़ुझाउ टियानकी माइनिंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
खनन स्टोरमा तपाईंलाई स्वागत छ
ज़ुझाउ Tianqi खनन टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
खनन बक्स के हो?
अक्टुबर 31१, २०० 2008 देखि आईडी सतोशी नाकामोटोले नौ पृष्ठको कागज प्रयोग गरी बिटक्वाइनको एक अरबौं युआन बराबर पातलो हावाबाट सिर्जना गर्न प्रयोग गरे। त्यसबेलादेखि यस पूर्ण विकेन्द्रीकृत बेनामी नेटवर्कमा, सहमति संयन्त्र अनुसार उत्तर बाहिर काम गर्ने जो कोहीलाई व्यवस्थित पुरस्कृत गरिएको छ PoW: प्रूफ-अफ-वर्क र ब्लक प्याकिंग नोड पूरा गर्ने पहिलो व्यक्ति हो। पुरस्कार १२..5 बिटकोइनहरू, वा लगभग ,000$,००० हो। यस प्रक्रियालाई "खानी" को रूपमा चिनिन्छ।
काम को प्रूफ को प्रकृति पूर्ण छ। तपाईंको उपकरणको कम्प्युटि ofको बलियो क्षमता, उत्तर गणना गर्ने उच्च सम्भावना हो। प्रारम्भिक दिनमा, खानीहरूले सीपीयू र GPU हरू प्रयोग गर्नका लागि अलग खानी गर्थे। कम्प्युटि power उर्जामा बृद्धि भएपछि धेरै व्यक्तिको कम्प्युटि power उर्जा जम्मा गर्ने खानी पूलहरू देखा प .्यो। खनन पोखरीमा उत्तर गणना गर्ने र पुरस्कार पाउने ठूलो सम्भावना हुन्छ, ता कि सबैलाई इनाम र सेयर पनि बढ्यो। एकै साथ समस्या पनि देखा पर्‍यो, min ठूलो संख्यामा खनिकहरू एकसाथ स्ट्याक गरियो, जसले धेरै शोर र गर्मी उत्पादन गर्दछ र ठूलो बिजुली खपत गर्दछ। त्यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या छ यातायात गर्न धेरै गाह्रो छ, किनकि त्यहाँ धेरै खनिक र उपकरण लाइन छन्। यसैले मेरो बक्सको जन्म भयो।
हाम्रो उद्देश्य संसारको लागी खुला वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
यो कन्टेनाइज्ड खनन कन्टेनरले गोदाम खानी भन्दा बढी कुशल समाधानको साथ खनिकहरूलाई प्रदान गर्दछ। क्रिप्टोकरन्सी खानीको लागतको एक ठूलो हिस्सा विद्युत खपत र गोदाम लागतबाट आउँदछ। कन्टेनरमाइज खानी कन्टेनरहरू सजिलै ट्रकमा ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ र जहाँ तपाईं कम पावरसँग जान चाहानुहुन्छ। यो साइट द्वारा प्रतिबन्धित छैन, र कडा गतिशीलता छ, र लागत प्रभावी साथ साथै पुन: प्रयोगयोग्य छ।
टियानकी माइनिंगले कन्टेनर रिफिटसँग खानी बक्सहरू बनाउने विगतको इतिहास समाप्त भएको छ। यसले खनन बक्सहरू उत्पादन गर्न नयाँ हल्का इस्पात प्रयोग गर्दछ, तिनीहरूलाई अधिक दिगो र हल्का बनाउँदछ। थपको रूपमा, हामीले क्रिप्टोकरन्सी खानी कन्टेनरहरू निर्माण गरेका छौं जुन दुबै ASIC र GPU खनिकहरू सबै ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न होस्ट गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंलाई टियान्कीमा 40० फिट कन्टेनर, विशेष अनुकूलित खनन बाकस, वा बिभिन्न विशेष आवश्यकताहरूको आवश्यक छ भने, कुनै पनि मागहरू पूरा हुनेछन्। २०२० मा, हाम्रो भर्खरै विकसित गरिएको डिटेचेबल माइनिंग बक्स र तेल कूल्ड माइनिंग बक्स ढुवानी गरीएको छ र cus द्वारा प्रयोगमा ल्याइएको छTomer
"हामी एक कम्पनी हौं जसले बिट-सिक्काको आधारभूत सेवाहरुमा विशेषज्ञता पाएको छ। यसको व्यवसायलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ: मोबाइल खानी बक्सहरूको बिभिन्न स्पेसिफिकेसनको उत्पादन, दोस्रो बजारका खनन मेशिनहरू बजार मूल्य भन्दा कम आपूर्ति गर्ने"
नमस्ते! यो टियानकी खानी हो। हामी क्रिप्टोकरन्सी मोबाईल खनन बक्सको प्रयोग र बिक्रीमा विशेषज्ञता राख्ने कम्पनी हौं र प्रयोग गरिएको खानी मेशीन। हामी लगभग ,000,००० वर्ग मिटर को निर्माण कारखाना छ, Zushou चीन मा ग्राहकहरु द्वारा आवश्यक मोबाइल खनन बक्स को विभिन्न विनिर्देशन को उत्पादन र निर्यात। हामी ग्राहकको प्यारामिटर मांग को अनुसार खनन बक्स अनुकूलित गर्न सक्छौं। अवश्य पनि, हामीसँग मोबाइल खनन बक्सहरू पनि छन् जुन चिनियाँ बजारमा स्टकमा प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ! हामी तपाईंको आवश्यकता अनुसार साइटमा स्थापना र मर्मत सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछौं। छोटकरीमा, टियानकीले तपाईंलाई खनन क्रिप्टोकुरेन्सीमा आवश्यक सबै चीजहरूको लागि समाधानहरूको पूर्ण सेट प्रदान गर्दछ,
हाम्रो आफ्नै स्रोतहरूले धेरै चिनियाँ खानी मालिकहरू र ठूला खनिकाहरूलाई आकर्षित गर्दछ, त्यसैले हामी सजिलैसँग दोस्रो हातको खान संसाधनहरू पाउन सक्दछौं सबैभन्दा कम मूल्यमा। तसर्थ, हामीसँग माइनिंग मेसिन बजारमा तपाईंलाई चाहिने खानीको मेशिन फेला पार्न हामीसँग पर्याप्त फाइदाहरू छन्। हामी हाम्रो कम्पनीको सम्मानका साथ ग्यारेन्टी दिन्छौं: हामीले पठाएको प्रत्येक बिट-सिक्का खानी मेसिन हाम्रो आफ्नै टोलीले परीक्षण गर्छ, र हामी प्रत्येक खानी मेसिनको सामान्य अपरेशन सुनिश्चित गर्न सक्छौं।
एन्टबक्स कन्टेनर, antminer कन्टेनर, बीटीसी कन्टेनर, क्रिप्टो खनन asic, क्रिप्टो खनन उपकरण प्रयोग, बिटमेन कन्टेनर,